Umthandazo kaSt. Cyprian wokuba sisityebi kwiVeki enye [+]
kuqala » Imithandazo » Umthandazo kaSt Cyprian wokufumana isityebi
Uxolo, uthando kunye nempilo zibaluleke kakhulu kodwa inyaniso yeyokuba kule mihla akukho mntu uphila ngaphandle kwemali. Kungenxa yesi sizathu ukuba siza kutyhila apha kwiblogi a Umthandazo kaSt Cyprian wokuba sisityebi.
Ngokuqinisekileyo kufuneka ukuba sele unethemba lokuba awuzu kuba sisityebi ngobusuku nje obunye, ayizukwenzeka loo nto.
Okuza kwenzeka kukuba uya kukwazi ukufumana imali eninzi kwaye uya kukwazi ukonga, nokuba kungeveki, ngenyanga okanye enyakeni.
Injongo yomthandazo kukukunceda wenze imali eninzi, ukwazi ukonga imali onayo, kwaye kwixesha elizayo, ukuba kufanelekile, ube sisityebi sokwenene.
Ngaba umthandazo kaSt Cyprian wokufumana ubutyebi usebenza?
Ukuba ucinga ukuba imithandazo isebenza kuphela ekucoceni umoya kunye ne-aura kunye nokuhamba ngcono ebomini, uphosakele kakhulu.
Imithandazo inokwenza okungakumbi kunoko.
Kukho eneneni imithandazo yokwenza imali eninzi, kwaye nokuba sisityebi, oko kusebenza ngokwenene!
Njengoko besitshilo kweli nqaku, awuyi kuba sisityebi ngobusuku nje obunye, kodwa uya kuqokelela ubutyebi imihla ngemihla, de ube sisityebi ngokwenene.
Eli lelona thuba lakho lilungileyo (kwaye lilula) indlela yokufumana ubutyebi, imali kunye nobutyebi, ngaba uza kuyichitha?
Umthandazo weSaint Cyprian ukuze ube sisityebi kwiveki enye
Lo mthandazo waseSt. Cyprian wokufumana ubutyebi ulula kwaye unomnikelo ekupheleni.
Ekupheleni komthandazo siya kukucacisela ukuba yintoni na umnikelo kwaye ungenziwa njani.
Saint Cyprian, ndifuna uncedo lwakho ngeli xesha ebomini bakho.
Ndifuna imali, hayi kakhulu, hayi enye, ndifuna kakhulu, imali eninzi ngobomi bam.
Ubomi bam kufuneka buphucuke ke ndithandaza kuwe Saint Cyprian.
Yenza imali, igolide, ubutyebi kwaye ubonelele ubomi bam ngemali eninzi.
Kwanga isipaji sam singagcwaliswa ngamatyala. Ngamana ingaqiniseka njengemvula esibhakabhakeni, njengoko isikhukukazi sikhala, njengoko ikati ikhula, nanjengenja.
Ngamana imali iyinxalenye yobomi bam ngendlela endingazange ndibe yiyo, hayi kakhulu, hayi enye, kodwa imali eninzi.
Gcwalisa ubomi bam ngemali. Gcwalisa ubomi bam ngobutyebi. Zalisa ubomi bam ngegolide. Gcwalisa ubomi bam ngazo zonke izinto ezilungileyo ezithengwa yimali.
Ngamana imali nobutyebi mabungabi kude kum.
Ndifuna ukuphakamisa ingalo yam ndibone imali, ndiphakamise intloko ndibone imali, ndiphakamise unyawo lwam ndibone imali.
Saint Cyprian, ndifuna uncedo lwakho kule nto. Ndiyazi ukuba unamandla okutsala ubutyebi kum kwaye ndiyazi ukuba uya kundinceda kuloo njongo.
Ndiyazi ukuba uya kuzizalisekisa zonke izicelo zam kwaye ngokutshintshiselana noncedo lwakho ndiya kukukhanyisa amakhandlela ama-3 abomvu kuwe iintsuku ezi-3 zilandelelana.
Umnikelo awunyanzelekanga. Sidla ngokubeka umnikelo kuba wenza umthandazo womelele.
Ukuba ufuna ukukhetha ukuthetha ngomnikelo, vele ukhanyise ikhandlela ngosuku, yonke imihla ebusuku, iintsuku ezi-3, oku ekupheleni kokuthandaza umthandazo.
Lo mthandazo unokuwuthandaza kabini ngemini, kube kanye ekuseni nakanye ebusuku.
Umthandazo kuThixo ukuba atsale impumelelo kunye nemali
Lo mthandazo ngowabo bantu bafuna nje ukutsala imali eyaneleyo kunye nobutyebi ukuze bahlawule amatyala abo kwaye baphile ubomi obulula nobunyanisekileyo.
Lo mthandazo wenzelwe uThixo ngoko nokuba ucela okuncinci, ungafumana ngaphezulu.
UThixo unceda abantu abaninzi, ungoyena “mbutho” unamandla esinokuthandaza kuwo, kodwa njengoko usazi ukuba akanikeli ngokuyintabalala, akanikeli ngaphezu koko sikudingayo, unikela nje ngokwaneleyo.
Owu Thixo onamandla onke, mdali wezulu nomhlaba, ndifuna ukucela amandla akho kulo mthandazo ukuba undincede kubomi bam bezemali.
Andifuni kukubuza kakhulu, ngokwaneleyo.
Ndifuna imali, hayi kakhulu, hayi kancinci, yanele nje ukwakha ubomi bam kwaye ndiphile ubomi obunyanisekileyo.
Ndidinga imali yokuhlawula amatyala am, ukuhlawula amatyala am, ukuhlawula amakhadi am okuthenga ngetyala, ukuhlawula irhafu yelizwe, kunye nokuhlangabezana nazo zonke iindleko ezihlala zinyuka eziza.
Kundinceda ukuba ndicuthe iindleko ndize ndinyuke emvuzweni ukuze ndiphile kakuhle kwaye ndonwabe.
Andibuzi nto ingako kuni kwaye andingomntu unyolukileyo, ndicela nje ngokwaneleyo ukuze ndikwazi ukuphila ubomi bam ngokonwaba ngaphandle kwamaxhala.
Ndincede Thixo wam, ndincede kakhulu kwesi sigaba sibi ndihamba kuso.
Ndiyazi ukuba uya kusenza isicelo sam ukuba uyathanda.
Lo mthandazo ungawuthandaza kabini ngemini.
Uthandaze kunye nomthandazo weSaint Cyprian ukuze ube sisityebi, ke uya kuba namandla emithandazweni yomibini kwaye uya kwenza yonke into ibe namandla ngakumbi.
Umthandazo wokuvula iindlela zemali zeSaint Cyprian
Enye yeendlela ezilungileyo zokutsala ubutyebi kukuvula indlela. Ngokungafaniyo neminye imithandazo, lo usebenza kakuhle ngaphantsi kweveki enye.
Iindlela zakho ziya kuhlala zivulekile kanye emva kokuthandaza umthandazo. Ke yonke imiqobo, iintshaba kunye nayo yonke into ekuthintelayo ekubeni nethamsanqa emalini nakwimpumelelo iya kunyamalala.
Umthandazo mfutshane kakhulu, kodwa unokuqiniseka ukuba womelele. Unokude uwuthandaze kunye neminye imithandazo ekweli nqaku. Ngoko ungayeki ukuthandaza, ilungile ngokulandelayo:
Sifuna nje ukunika ingqwalasela yokugqibela kwabo baza kuthandaza umthandazo weSaint Cyprian ukuze batyebe kunye nomthandazo kuThixo.
Awunakuze ulibale ukuba ukuze umthandazo usebenze kufuneka ube nokholo oluninzi kwaye ukholelwe.
Ukholo luhambisa iintaba kwaye kule meko luya kuhambisa amandla kunye namandla ayimfuneko ukuze isicelo sakho siphendulwe.
Ukuba u yenza umthandazo weSaint Cyprian ukuze ube sisityebi ngokholo, umzekelo, kuya kuba namandla amaninzi ukufikelela eSão Cipriano kwaye kuya kusebenza ngokufanelekileyo ngakumbi.
Yiba nokholo, kholelwa, thandaza kwaye ujabulele iingenelo zale mithandazo.
Thatha ithuba lokubona wethu umthandazo wokwaphula isiqalekiso kunye Umthandazo kaSaint George wokuvala umzimba.
Hlala noThixo, ithamsanqa kolu hambo lutsha lobomi bakho.
1 Ngaba umthandazo kaSt Cyprian wokufumana ubutyebi usebenza?
2 Umthandazo weSaint Cyprian ukuze ube sisityebi kwiveki enye
3 Umthandazo kuThixo ukuba atsale impumelelo kunye nemali
4 Umthandazo wokuvula iindlela zemali zeSaint Cyprian
4.1 Ukuqwalaselwa kokugqibela
Nge-7 kaCanzibe, 2019, 2: 48 am
Umthandazo omhle ophilayo eSaint Cyprian